Sawirro:- Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay askar xabado ku furtay Bajaaj – Kismaayo24 News Agency
Sawirro:- Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay askar xabado ku furtay Bajaaj
by admin 7th December 2019 7th December 2019 0125
Xasan Muuse Warsame iyo Xasan Xuseen Maxamed ayaa loo heystaa in ay si bareer ah ugu fureen rasaas laba gabdhood oo wada saarnaa Bajaaj mareysay bar kontorool oo ay ku qornaayeen 07-da bishii sagaalaad ee Sanadkan.
Xasan Muuse Warsame iyo Xasan Xuseen Maxamed ayaa ka wada tirsanaa ciidamada Boliiska, waxaana isla xilligii ay geysteen dhaawaca iyo dhimashada la wareegay hey’adaha baarista.
Hey’adda dambi baarista Boliiska CID ayaa ku soo wareejiyay labada eedeysane Xafiiska Xeer Ilaalinta, waxa uuna xafiiska weydiistay Maxkamadda 15-ka bishii Sagaalaad ee sanadkan in loo dhaa-dhiciyo xabsiga dhexe garsuge ahaan.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa soo eedeeyay labada eedeysane baaritaan dheer kadib 16-ka bishii tegtay, waxa ayna Maxkamadda weydiisteen in la muddeeyo dacwad qaadista Xasan Xuseen Maxamed iyo Xasan Muuse Warsame oo loo heysto dilka Marxuumada Istar Axmed Cabdulle iyo Dhaawaca Dhibane Faadumo Axmed Cabdulle oo ahaa walaalo marayay agagaarka Isbitaalka Masaarida ee degmada Hodan.
Shan cisha kadib ayay Maxkamaddu ballamisay dhageysiga dacwadooda.
Maxkamadda ayaa ugu horeynba u jeedisay eedaha loo heysto labada eedeysane, waxaana fursad loo siiyay in ay ka jawaab celiyaan.
Dable Boliis Xasan Xuseen Maxamed oo ka jawaabayay eedda loo heysto ee ah dilka iyo dhaawaca ay u geysteen gabdho walaalo ah oo Bajaaj wada saarnaa ayaa Maxkamadda u sheegay in ay si wada jir ah xabada u rideen isaga iyo eedeysanaha labaad ee Maxkamadda hor taagan.
Dable Boliis Xasan Muuse Warsame oo isna fursad loo siiyay in uu ka jawaab celiyo eedda ay Maxkamadda u jeedisay ayaa u sheegay Garsoorayaasha in si wada jir ah ay xabada u rideen iyagoo oo kaga dan leh in ay ku kala fududeeyaan Jaamka ka jiray Isgoyska Maseerida ee degmada Hodan.
Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida oo ugu horeynba lahaa hab raacca dacwadda ayaa Maxkamadda weydiistay in la dhageysto markaatiyaal uu ku jiray wadihii gaariga, waxa uu Maxkamadda u cadeeyay in si wada jir ah ay xabada kas ah ugu rideen Bajaajta uu wadaha ka ahaa taasina ay dhalisay In gabdha walaalo ah midna geeriyootay midna dhaawacantay.
Qoryihii dhaawacca ay ku geysteen, warqadaha dhaawacca iyo dhimasha muujinta iyo markaatiyaal kale ayay Maxkamadda dhageysatay.
Xeer ilaaliya ku xigeenka Ciidamada Qalabka Sida Dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed ayaa Maxkamadda u sheegay in labada eedeysane ay ku tala galeen dilka wadaha Mootada balse xabad uu riday Xasan Xuseen Maxamed xabad uu riday ay sababtay geerida Marxuumad Istar Axmed Cabdulle, halka Xasan Muuse Warsame uu dhaawac u geysatay Faadumo Axmed Cabdulle.
Qareenka labada eedeysane ayaa Maxkamadda u sheegay in ay ku wada jireen labada eedeysan howl shaqo oo lagu ogyahay, waxa uuna Maxkamadda weydiistay in magta dhibanayaasha lagu xukumo taliska Boliiska.
Dable Boliis Xasan Xuseen Maxamed ayay Maxkamaddu ku xukuntay diltoogasho oo ah qisaasta Marxuumad Istar Axmed Cabdulle halka Dable Boliis Xasan Muuse Warsame ay Maxkamaddu ku xukuntay Shan Sano oo xabsi ciidan ah iyo in uu bixiyo magta dhaawicii uu u geystay Faadumo Axmed Cabdulle sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Xukunka waxaa ka furan Rafcaan ku siman Sodon Cisha xukunka kadib.
Shaqaalaha dowlada ee Puntland oo la fasaxay maxay tahay sababta?
Haweeney Shacab ah oo dil ka geesatay Saldhig booliis oo kuyaala Muqdisho.
Ciidamada Dowlad Gobaleed Putland oo weeraray Saldhigii Alshabaab ee Gablka Bari.
nairobi 8th July 2017
Kenya oo joojisay Dhismihii ay ka waday Xadka ay soomalia la wadaagto ee Magaalada Beled-xaawo
admin 26th March 2018
Dowladda Baxreyn oo Imaaraatka Carabta u hiilisay Eedeyn kululna u jeedisay Soomalia